Ny mpikaroka ao amin'ny Washington State University dia namolavola fomba iray hitodika isan'andro plastikafako ho solika ho an'ny fiaramanidina, hoy ny oniversite tamin'ny talata. Navoaka an-tserasera tao amin'ny gazety anglisy Applied Energy ny fanadihadiana.
Nandeha tany ny mpikaroka fitaovana polyethylenetoy ny tavoahangy rano mineraly, tavoahangy zazakely ary harona plastika ho sombintsombiny mitovy habe amin'ny voam-bary ary apetraka amin'ny karbaona activated, catalyst. "Baked" ao anaty tubular reactor amin'ny mari-pana manomboka amin'ny 430 ° C ka hatramin'ny 571 ° C, ny sombiny dia niova ho 85% solika jet sy 15% diesel.
Milaza ny mpikaroka fa manana atôma hidrôzenina be dia be ny plastika, izay singa manan-danja amin'ny solika. Sarotra simba anefa ny plastika, ary ny fanampina catalyst ihany no afaka manapaka ny fatorany simika sy mamadika azy ho solika. Nahavita namadika plastika 500kg ho solika 350kg izy ireo ary namokatra gazy mora mirehitra toy ny hydrogen, methane, ethane ary propane. Saika ny angovo rehetra azo alaina amin'ny plastika dia azo angonina amin'ny fampiasana io fomba io, ary tsara ny kalitaon'ny angovo, ary mety amin'ny famokarana faobe ny dingana.